I-String ye-Geophone, i-Geophone evundlile - i-XYB
3 Uphiko Lwegefoni
I-Geophone eqondile neqondile
Inzwa yokuma komhlaba kweGeophone
Umtshina Wokushisa Okuphezulu Omnidirectional
Ikhebula lokuzamazama komhlaba
Isixhumi Sekhebula Esingaphansi Kwamanzi
Seismic Ikhebula Isixhumi
I-XYB ihlanganisa ndawonye ithalente nobuchwepheshe obuphambili emhlabeni, inabasebenzi bamazwe aphesheya abaqeqeshiwe.
Ngobuchwepheshe obuthuthuke kakhulu, imikhiqizo esezingeni eliphakeme, intengo enengqondo, kanye namakhasimende ethu ukuhlangabezana nekusasa eliqhakazile ..
Ngokugxila kumsebenzisi, dala inani eliphakeme labasebenzisi izinhloso zebhizinisi.
Inkampani izoqhubeka nokwenza isitayela sebhizinisi "ngokunemba, ukuqaphela, ukuqina".
I-240 Hz High Spurious Frequency Geophone 0.75% L ...
I-240 Hz High Spurious Frequency Geophone 0.1% Lo ...
200, Ithempelesha ephezulu yokushisa YB-15A-2400CR
100Hz Ukunemba okuphezulu Futhi Esitebeleni Signal lokukhipha Ge ...
I-Wuhan XYB Geophysical Exploration Equipment Co, Ltd.
Le nkampani izibophezele kwi-R & D, ekwenziweni nasekuthengisweni kwezinsimbi zokuhlola i-petroleum, imishini yokubhola neyokukhiqiza, kanye nemishini yokuhlola komhlaba. Isidlulisile isitifiketi sohlelo lokuphathwa kwekhwalithi ye-ISO9000, isitifiketi sohlelo lokuphathwa kwemvelo, isitifiketi sohlelo lokuphathwa kwempilo nokuphepha emsebenzini.
Imikhiqizo ehamba phambili ye-geophone yokuhlola ukuzamazama komhlaba inezichungechunge eziyisithupha, izinhlobo ezingaphezu kuka-60.
Imikhiqizo isetshenziswa kakhulu ku-petroleum, amaminerali nokuhlolwa komhlaba, umgwaqo, ibhuloho, ukwakhiwa kwedamu nomhubhe, ukudlidliza okusindayo kwemishini, ukuqapha ukuzamazama komhlaba njll.
Izinhlobo ezingaphezu kwama-60 zigunyaziwe ukusetshenziswa kwelungelo lobunikazi kuzwelonke
Kubandakanya amalungelo obunikazi angaphezu kwayi-20 okusunguliwe, izinhlobo ezingaphezu kwezingu-10 zezimpumelelo zesayensi nezobuchwepheshe ezisezingeni lesifundazwe, kanye nemiklomelo yezesayensi nezobuchwepheshe engaphezu kuka-20 kuzwelonke, esifundazweni nakomasipala. Isidlulisile isitifiketi sohlelo lokuphathwa kwekhwalithi ye-ISO9000, isitifiketi sohlelo lokuphathwa kwemvelo, isitifiketi sohlelo lokuphathwa kwempilo nokuphepha emsebenzini.
Isidlulisile isitifiketi sohlelo lokuphathwa kwekhwalithi ye-ISO9000, isitifiketi sohlelo lokuphathwa kwemvelo, isitifiketi sohlelo lokuphathwa kwempilo nokuphepha emsebenzini.
Imakethe yomkhiqizo ihlanganise amasimu amakhulu kawoyela wasekhaya namasimu wamalahle, futhi yathunyelwa eYurophu, eMelika, e-Afrika naseNingizimu-mpumalanga ye-Asia nakwamanye amazwe nezifunda ezingaphezu kwama-50.
Ukusebenza komkhiqizo osezingeni eliphakeme nedumela elihle kungaphansi kokwamukelwa nokudunyiswa okukhulu.
Septhemba 02, 2020
Ithimba likaSercel And Tronic Lokuthola Ama-Geophones Asekelwe Ku-MEMS
I-Sercel ne-TRONIC'S Microsystems, babambisene ekukhiqizeni isizukulwane esisha sezinzwa zokuzamazama komhlaba, noma ama-geophones, ngokususelwa ku-MEMS. Idizayinwe yi-CEA Leti, i-accelerometer yesisombululo esingu-0.1µg efakwe ngaphansi kwe-vacuum yenziwe yathuthukiswa futhi yathuthukiswa yi-TRONIC'S Microsystems. Ge ...
I-Urban Geophone Array Inikeza Ukubukeka Okusha eLos Angeles Basin
1 Agasti 2018 – Kusetshenziswa inqwaba yama-geophones angalingana nekhofi atshalwe cishe inyanga emagcekeni, izinkundla zegalofu nasemapaki omphakathi, abacwaningi baqoqa idatha eyanele ukubavumela ukubala imephu yokujula nokwakheka kwamabheshi aseSan Gabriel naseSan Bernardino ILos Angeles, eCalifornia. Seismo ...
Ukwabiwa Kwemakethe YeGeophones, Ukubuka konke Kwezesifunda Somhlaba Wonke, Amathuba, Amathrendi, Ukukhula Komhlaba Wonke, Umthelela WeCovid-19 Embonini, Ukuhlaziywa Kwenkampani Ehamba phambili, Nesibikezelo Sezwe Elibalulekile kuya ku-2025
Umbiko weMakethe yeGeophones Ngaphansi kokuhlaziywa kwesabelo semakethe ngabadlali abakhulu, Umbiko weMakethe yeGeophones uhlanganisa imali, imali engenayo, kanye nokuhlaziywa kwentengo yibhizinisi kanye nezinye izigaba ezinjenge… Umbiko Wezimakethe ZeGeophones Ngaphansi kokuhlaziywa kwesabelo semakethe ngabadlali abakhulu, amaGeophones Maka ...
IShelter ibiligama elithembekile emshuwalense iminyaka engaphezu kwengu-15. Namuhla, ngokuziqhenya sikhonza amakhasimende angaphezu kwezigidi eziyi-16 ezweni lonke.Shelter kube yigama elithembekile emshuwalense iminyaka engaphezu kwengu-15.
Isitezi se-24, iBlock A, No. 628, Umgwaqo Wuluo, Isifunda saseWuchang, iWuhan, iHubei